Fọm Rimọnbant (168273-06-1) hplc ma98% | Aṣraw PCT Drugs
/ ngwaahịa / Ọla abụba / Rimonabant ntụ ntụ
SKU: 168273-06-1. Category: Ọla abụba
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke ntụpọ Rimonabant (168273-06-1), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Rimonabant ntụ ntụ video
Ngwurugwu ukwu nke ukwu na-emepụta ihe
aha: Rimonabant ntụ ntụ
Molekụla Formula: C22H21Cl3N4O
Ọbara arọ: 463.79
Ngwurugwu na-ezighi ezi nke na-abawanye uru
Azu Rimonabant (CAS 168273-06-1) bụ ọgwụ na-egbochi ọgwụ ọjọọ nke Sanofi-Aventis na-ere ma na-ere ahịa. Ọ bụ agonist dị mgbagwoju anya maka CB1 na-anata cannabinoid. Ụzọ kachasị mma ọ na-eme bụ ịkwụsị agụụ. Rimonabant ntụ ntụ bụ onye mbụ họrọ CB1 na-akwado ihe nkwụnye nkwado iji mee ihe ọ bụla n'ụwa.
Raw Rimonabant ntụ ntụ Usage
Ihe na-eme ka ihe dị na 5mg dị elu nke 20mg. Mkpa gị maka ya na otu esi edozi ya ga-esite na ndụmọdụ nke onye ọkachamara nri. Ejighị arụmọrụ Rimonabant rụọ ọrụ. A na-eme ya ka eji ya na nri nri kwesịrị ekwesị na mmega ahụ iji meziwanye ahụmmadụ nke mmadụ ka ị na-ebelata ogo gị.
Kedu Ụdị Nsonaazụ M Kwesịrị Ịmanya Anya na Uzu
E mepụtara Acomplia iji mesoo ndị dị oke ibu ma buru ibu na-eji na mgbakwunye mmega ahụ na nri. Ọrịa, ndị na-arịa ọrịa nwere nnukwu abụba n'ọbara na ọrịa shuga nke ụdị 2nd.
Akwaplia kwenyekwara na Sanofy dịka ọrịa nke nwere ike ịkwụsị mmalite nke ọrịa obi. A kwere ndị nwere nnukwu ọkpụkpụ (ụmụ nwanyị 88 cm na ụmụ nwoke 102 cm) nkwa na ha ga-enweta nnukwu uru site na iji ọgwụ a.
Akwụsị ịṅụ sịga E gosipụtara na Rimonabant ntụ ntụ nwere ike inyere ndị na-aṅụ sịga aka ịkwụsị ise siga. Ugbu a, Sanofi-Aventis na-eme nyocha iji gosipụta na ntụpọ Rimonabant bụ ọgwụgwọ maka ịṅụ sịga-ịkwụsị. Usoro ihe omume (Nyocha na Rimonabant ntụ na ụtaba) nwere ihe karịrị 6,000. Usoro ihe a na-enyocha ọgwụgwọ abụọ metụtara ịṅụ sịga. Nke mbụ bụ inyere onye na-ese siga aka ịkwụsị. Usoro nke abụọ bụ iji gbochie ibu ngwongwo nkwụsị.
O doro anya na ihe mbụ gosiri na Rimonabant ntụ ntụ dị irè maka ọgwụgwọ abụọ ahụ. Sanofi-Aventis natara nkọwa doro anya site n'aka FDA na ha agaghị ekwe ka ọ ree ntụ ntụ Rimonabant na United States dị ka ọgwụ na-aṅụ sịga na-enweghị ihe ọmụmụ ọ bụla. Ihe nyocha 2007 nke Cochrane mere gosiri na ntụ ntụ Rimonabant nwere ike inye aka ịkwụsị ịṅụ sịga na ihe gbasara 11 / 2-fold.
Ihe na-eme ka okpueze Rimonabant belata nzaghachi nke nzaghachi maka ịchọ cocaine nke 2 malitere site na 3 kachasị na-eme ihe nlọghachi nke ụmụ mmadụ nwere. Ha na-egosi na priming. O nwekwara ike belata omume nke ịchọ opiate na ethanol.
Tetrahydrocannabinol bụ ihe nhazi nke na-ebelata ebe nchekwa gị. Enwere echiche na Rimonabant ntụ ntụ (CAS 168273-06-1) nwere ike ime ka ncheta dị mkpirikpi ka mma. N'ịchọpụta ọmụmụ ụmụ anụmanụ, oke dị iche iche gosipụtara ihe dị ịtụnanya site n'ịgbanwe ozi na ncheta ha nke dị mkpirikpi.
Ịdọ aka ná ntị na ájá dị elu
Na October 2008, ọgwụ Acomplia ejirila ikikere ha niile na Europe. Nkà mmụta ọgwụ ahụ nyere ihe ize ndụ nke na-eme ka uru dị ukwuu nke iji ya rụọ ọrụ. A chọpụtara na Acomplia nwere mmetụta dị egwu kachasị dị ize ndụ, nke bụ nsogbu na nsogbu uche. Ọ bụkarị ịda mbà n'obi. Nnyocha a mere n'oge na-adịbeghị anya gosiri na ihe ize ndụ nke oria a dị nnọọ ukwuu karịa nke a kwuru na mbụ. Nnyocha e mere gosiri na ọ bụrụ na ị jiri ọnụọgụ abụọ nke iji Acomplia na-eji placebo, ihe ize ndụ nke inwe nsogbu psychiatric bụ okpukpu abụọ karịa Acomplia karịa nke ọzọ.
Mgbe e mepụtara ngwaahịa ahụ ma malite ịmalite ahịa, e mepụtara ụfọdụ ndụmọdụ na usoro ihe omumu. Ha ka na-ebelata ihe ize ndụ na ugboro ole mmetụta ndị a. Nyocha ụfọdụ nke ndị ọkachamara na Europe gosipụtara na enweghị njedebe nwere ike ibelata ihe ize ndụ nke inwe nsogbu. Mgbe nke ahụ gasịrị, a napụrụ ngwaahịa ndị Europe. Ị ga-agwa dọkịta gị okwu mgbe ọ dịịrị gị mma, ma ọ bụrụ na ị na-eji Acomplia ma kwurịta ọgwụgwọ ahụ. Ka o sina dị, ịnwere ike ịmecha Acomplia oge ọbụla ịchọrọ.
N'oge a na-agwọ ọrịa ahụ, e mere ka o doo anya na ndị ọrịa ahụ na-anọgide na-agwọ ọrịa na-atọpụ ibu. Ndị ahụ, bụ ndị kwụsịrị ịgwọ ọrịa, nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ibu ahụ, mgbe ha kwụsịrị. I kwesiri icheta na ị na-eri nri ma na-eme ihe mgbe ị na-agwọ gị ma mgbe ọ gasịrị. Ọ ga - enyere gị aka ịtọpụtakwu ibu gị. Enweghị ike na nchebe ka ndị na-eji ọgwụ ahụ eme ihe karịa afọ abụọ. Acomplia nwere ike iwetara gị ngbanwe na-adịgide adịgide na mgbaàmà ịda mbà n'obi. Ị ga-agwa dọkịta gị ozugbo ma kwụsịrị ịṅụ ọgwụ ahụ, ọ bụrụ na ị chọpụtara na afọ adịghị gị afọ ma ọ bụ na ị nwere mmetụta na nchegbu iru újú.
Acomplia amụrụ na America maka afọ abụọ. Ha chọpụtara mmetụta ndị dị otú a dị ka ọnọdụ nke ịda mbà n'obi, iwe na nchegbu oge niile. Ịnọgide na-eji ọgwụ a eme ihe dị egwu. Ọ bụ ya mere FDA anaghị anabata ya.
EU kwadoro Acomplia na 2006. Mgbe e mesịrị, ha wepụrụ ya n'ahịa n'ihi na e nwere oge na-akọ banyere nsogbu siri ike na ọnọdụ uche, ọbụna ọnọdụ nke igbu onwe ya.
Ndị mmadụ jiri Acomplia kọọrọ maka ụfọdụ mmetụta ndị ọzọ:
Ụdị oké ụjọ na nchegbu
Enweghị ike ịda n'ụra
Ụda mbà n'obi
Synephrine, ma ọ bụ dịka ọ kachasị mara, Bitter Orange, bụ osisi nke akwukwo, mkpụrụ osisi na ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi na-ewe ihe ubi ma jiri ya mee ọgwụ na peel n'onwe ya iji mee mmanụ. A pụrụ itinye mmanụ mmanụ oroma mmanụ n'ahụ akpụkpọ ahụ iji nyere aka n'ịgwọ ọrịa, dị ka ndị na-agba ụda na ndị na-eme egwuregwu na-agba ụkwụ.
Ọ bụ ezie na a ka na-eduzi ọtụtụ ọmụmụ, enwerekwa ihe àmà zuru oke iji gosipụta na mgbe mmadụ na-ericha mmanụ ocha bara oke, ọ nwere ike ịkwụsị agụụ. Nke a bụ ebe synephrine na-egosi ihe ịrịba ama nke oke ọnwụ n'etiti ndị ọrụ dị ka ọ na-emepụta mmetụta na-adịgide adịgide n'ime ahụ iji mee ka onye na-eri ya nwee mmetụta zuru oke ruo ogologo oge ma belata ọnwụnwa ọ bụla maka ọchịchọ ma ọ bụ ọchịchọ ịṅụ nri ọzọ. Site n'iji obere nri, ị na-eri obere calorie, nke n'aka nke ya, na-ebute ọnwụ dị arọ maka oge.
Powder Powder Rimonabant (CAS 168273-06-1)
Raw Rimonabant ntụ ntụ Marketing
Otu esi zụta ntụ ntụ Rimonabant (CAS 168273-06-1) site na AASraw
Rimonabant Raw Powder Ezi ntụziaka:
Ihe nfe kachasị dị irè na-eme ka ọ bụrụ ntụpọ